Dhirendra Rumdali: July 2011
tanuja's shop location
Posted by dhirendra at 8:30 PM No comments:
this is my home location on wikimapia
Posted by dhirendra at 2:51 AM No comments:
सन्दर्भ : बलबहादुर राई स्मृति दिवस
‘साहिँला राई’सँगका सम्झनाहरु
'कालले बैश त लैलै भन्दैन है लैलै' खुशी भएको बेला यो गीत गाउनु हुने मन्त्री किकी आज हामी बीच हुनुहुन्न । भौतिक रुपमा नरहनु भए पनि विभिन्न कार्यहरुमा उहा“को योगदानका कारण्ा हाम्रो सम्भmनामा जहिल्यै जीवित हुनुहुन्छ । राजनैतिक संघर्ष्ाका त्रmममा तत्कालिन प्रहरी प्रशासन र शासकहरुबाट 'बले'को त्रmान्तिकारी छवि बनाउनु भएका उहाँको परिचय राजनैतिक परिवर्तनको छालसँगै परिवर्तित हु“दै अगाडि बढेको पाइन्छ । 'बहुदल बाजे', 'एमपी बाजे', 'मन्त्री बाजे'को उपनामले परिचित बलबहादुर रार्इ पारिवारिक नाताका कारण्ा पनि नजिक हुन सजिलो भयो । गाउँ र ठाउँ अनुसारका आफ्‍नो पहिचान बनाउनु भएका उहा“लार्इ यो लेखमा भने 'साँहिला रार्इ' नै भन्न रुचाएको छु । किनभने मलार्इ सम्भmना भएसम्म उहाँले आफुलार्इ जहिल्यै 'साँहिला रार्इ' नै भनेर गर्व गनर्ुहुन्थ्यो । उहाँले कहिल्यै आफु सांसद, मन्त्री भन्ने दम्भ पाल्नु भएन । उहाँले जहिल्यै दोहोर्‍याउनु हुन्थ्यो, 'म कान्छा रार्इको छोरा साँहिला रार्इ हु“ ।' उहा“ँसँगै मलगायत हाम्रो दावँलीहरुले थुप्रै कुराहरुको बारेमा जानकारी राख्ने अवसर पायौं । गलत कामका लागि बोहक कतिपय ठाउँमा उहाँको नाम लिएर धेरै काम पनि चलेका छन्‍ भने कतिपय ठाउँमा उहाँको नामसँग जोडिदा कतिपय साथीहरु चिढिएका पनि होलान्‍ । कारण्ा उहाँको राजनैतिक आस्थाका कारण्ाले गर्दा । तर मलार्इ गर्व छ कि उहाँलार्इ कसैले पनि कांग्रेस मात्र हो भनेर आैंला ठड्‍याउन सकेनन्‍ । बरु उहाँलार्इ त्यागी, कर्तव्यनिष्ठ र इमान्दार नेताको रुपमै धेरैले सम्भmेका छन्‍ । यो उहाँको उपलब्धी ठानेको छु ।उहाँ र मेरो उमेरमा चानचुन तीन दशकको मात्र फरक हो । यसो भएपछि उहाँसँग धेरै संगत गनर्े, जान्ने अवसर नपाउने नै भइयो । उहाँको बारे धेरै जान्ने अवसर नपाए पछि धेरै लेख्ने त कुरै आएन । तर, मेरो चेतनाको पर्दा खुलेदेखि यता सँधै आस्था र विश्वासका पात्र रहनुभएका उहाँको बारे आफुसँग रहेका केही सम्भmनाहरुलार्इ यहाँ बाँड्‍न चाहान्छु । यी अनुभवहरु अनुभव र अनुभूतिमै सीमित हुनेछन्‍ । अन्यथा उहाँसँग संगत गनर्े साथीसँगीको अगाडि 'इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान' गरे जस्तो हुन्छ । तथापि उहाँसँग बिताएका केही पल र आफ्‍ना पक्ष्ाबाट अनुभूत गरेको अनुभूतिहरुलार्इ यहाँ समेट्‍ने प्रयास गरेको छु ।
कांग्रेस र कम्युनिष्टको भmण्डा :
सम्भवत मैले देखेको पहिलो भmण्डा भनेको नेपालको राष्टि्रय भmण्डा नै हो । विद्यालयमा हरेक विहान गरिने प्रार्थनाको बेला निलो किनारा भएको दोहोरो त्रिकोण्ाात्मक र दुवै त्रिकोण्ाका बीच(बीचमा रहेको चन्द्र(सूर्य अंकित रातो भmण्डा देखिन्थ्यो । भmण्डाको आवश्यकता बारे केही थाहा थिएन, मात्रै थाहा थियो त भmण्डा प्रार्थनाका बेला चाहिन्छ भन्ने मात्रै । राष्टि्रय भmण्डालार्इ एकजना नाइके विद्यार्थीले छातिमा टेकाएर प्रार्थनाको लागि अगुवार्इ गथ्र्यो । त्यो भmण्डा बोक्न पाउनु निकै गर्वको कुरा हुन्थ्यो । यो बाहेकका भmण्डा हुन्छ भन्ने थाहै थिएन । तर, एकाएक 'एमपी बाजे'को आँगनमा दुइवटा भmण्डा फफराएको देख्न पाइयो । वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल भएपछि खुशियालीमा भmण्डा गाडिएको रहेछ । यो २०४७ सालतिरको कुरा हो । उहाँको आँगनको बाटो भएर विद्यालय जानुपथ्र्यो । आँगनको दुवै किनारामा सिँगै बाँसमा भmण्डा गाडिएको थियो । एकातिर तीनभागमा विभाजित भmण्डाको तल(माथि रातो र बीचमा सेतो माथि चारतारा थियो भने अर्कोतिर रातो भुँइमा हसिया(हथौडा त्रmस भएको भmण्डा थियो । धेरै टाढादेखि प्रस्ट देखिने यी भmण्डाहरु केटाकेटीका लागि आकर्ष्ाण्ाको केन्द्र नै बन्यो ।
पहिलो भेट :
उहाँसँग पहिलो भेट भएको कहिले हो यकिन भन्न सकिन्न । नाताले उहाँ फुपाजु बाजे पनि भएको र सदरमुकाम जान(आउनका लागि हाम्रै घरको आँगनबाट हिँड्‍नु पनर्े भएकोले सानै उमेरमा देखभेट भएको होला । तथापि आफ्‍नो चेतना आएपछि उहाँलार्इ पहिलोपटक भेटेको भनेको २०४८ साल पछि नै हो । म त्यसबेला राज्यलक्ष्मी मावि उँबुमा निमावि तहको अध्ययन शुरु गर्दै थिएँ । उहाँ मन्त्री भएर आउनु भएको रहेछ । स्कुलको प्रांगण्ामा भव्य कार्यत्रmम आयोजना गरिएको थियो । के कार्यत्रmम हो ? सम्भmन गाह्रो छ । तथापि त्यसबेलाका डिएसपी लोकबहादुर थापाले किकीलार्इ सलाम ठोकेको भने अभmै आँखामा भmलभmली छ । डिएसपीथापाको स्वर अलि ख्यारख्यार गनर्े खालको थियो । स्कूलको बीचमा गारो लगाएर उठाइएको चौकुने स्टेजमा रहेको कुर्सीमा बस्नु भएका किकीलार्इ डण्ठा देव्रे काखीमा च्याप्दै सलाम ठोकेको भmल्भmली छ । त्यसबेला मनमा लाग्थ्यो, किकी त प्रहरीभन्दा पनि ठूलो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ ।
चेसमा चासो :
उहाँ चेस खेल्न साह्रै मन पराउनुहुन्थ्यो । चेस मन पराउनुको कारण्ा कहिल्यै सोध्ने ज्ञान आएन । बरु उहाँले भनेको समयमा चेस खेलेर दिन(रात भने कटाइयो । उहाँसँग चेस खेल्दाका थुप्रै रमाइला प्रसंगहरु छन्‍ । साँभm(विहान उहाँको छेउमा देखा पर्नै नहुने । जसलार्इ देखे पनि चेस खेलिहाल्नुपनर्े । घरमा उपलब्ध भएका जोकोही युवाहरुलार्इ उहाँले चेस खेल्न आदेश गरिहाल्ने । उहाँको ढोका छेउमा पर्न पनि केटाहरु डराउँथे । यसमध्ये म पनि एक हुँ । तर कहिलेकाँही भने नामै किटेर बोलाउनुहुन्थ्यो । त्यसपछि उहाँसँग चेस खेल्न तयार नभर्इ धरै नपाइने । धेरैपटक यसरी उहाँसँग चेस खेलेको याद छ । विहानको समयमा खाना खाने बेला नभएसम्म र बेलुकीभए निकै अबेरसम्म खेल्नु नै पनर्े । त्यही भएर पनि जोकोहीले खेल्न हिच्किचाउँथे । चेसमा उहाँको खेल सामान्य नै हो । त्यति अब्बल चाँहि होइन । हार(जीत भइरहन्थ्यो । तर, कतिपय सन्दर्भमा भने जानी(जानी हारी दिनुपनर्े । सामान्य खेल्दै जाँदा उहाँले जित्नु भएमा 'तँ पनि राम्रो खेल्दो रै'छस्‍, तर के भएर हारिस्‍ ? ल फेरि एकपटक खेलौं । अब चाँहि तैं जित्छस्‍' भन्नुहुन्थ्यो । अनि फेरि खेल शुरु गर्‍यो । लगातार तीनपटक नजितेसम्म उहाँले छाड्‍दै नछाड्‍ने । दुर्इपटक उहाँको जीत भएपछि आफुले एकपटक जितिएमा फेरि भीडेको भीड्‍यै गनर्ुपनर्े । निन्द्राले हत्तु पारेपछि सुत्नका लागि उहाँकै जीतको सुनिश्चिताका लागि जानी(जानी हार्न खोजे पनि उहाँले धरै नदिने । बेलुकी उहाँसँग खेल खेल्दा १/२ बज्ने गथ्र्यो । खेल जितेपछि उहाँले जहिल्यै दोहोर्‍याउनु हुन्थ्यो, 'मलार्इ चिनेका छौ ?' अनि आफुले, 'हजुर चिनेको छु किकी ।' भनेपछि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, 'मेरो घर ओखलढुंगाको मोली हो । म कान्छा रार्इ नवलसिंको छोरा हुँ । मलार्इ साहिँला रार्इ भन्छन्‍ ।' यो उहाँले जहिल्यै भन्ने गनर्ुहुन्थ्यो । यसले पनि उहाँ आफ्‍नो माटो र पुर्खाको बारे निकै गर्व गनर्ुहुन्थ्यो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
बाघचालका राजा :
चेस खेल्न कहिले ? कहाँ ? कोसँग ? सिक्नु भयो भन्ने सोध्ने होस नै आएनछ । अहिले सम्भmदाँ लाग्छ, यदि यो प्रश्न गरिएको भए उहाँको बारे धेरै कुरा जान्ने अवसर पाइन्थ्यो । तर मलार्इ लाग्छ, उहाँले चेस खेल्न अलि पछि नै सिक्नु भएको हो । यो मेरो अनुमान मात्रै हो । यथार्थ उहाँका परिवारलार्इ धेरै थाहा पनि हुन सक्ला । उहाँले चेस खेल्न पछि सिके पनि बाघचाल खेल्न भने बाल्यकालमै सिक्नु भएको थियो । केटाकेटीमा गोठालो जाँदा होस्‍ या मेलापात जाँदा बाघचाल खेलेको कुरा उहाँले धेरैपटक सुनाउनु भएको थियो । चेसमा उहाँलार्इ धरमर बनाइए पनि बाघचालमा भने उहाँलार्इ छुनै नसकिने । चेस खेल्दा नतिजा तल(माथि भइरहन्थ्यो । तर बाघचालमा भने उहाँलार्इ जित्न सकेको मलार्इ सम्भmना छैन । उहाँ बाघ र बाख्रा चलाउन उत्तकिै सिपालु हुनुहुन्थ्यो ।
खाटमुनी ओछ्‍यान :
रातभरी उहाँसँग चेस खेलेपछि सुत्न ढिला हुन्थ्यो । विहान उहाँ ४/५ बजे नै उठ्‍नु हुन्थ्यो र नुहार्इधुवार्इ गरेर पुजापाठमा व्यस्त हुने गनर्ुहुन्थ्यो । उहाँले पुजापाठ सकेर फर्कदा घरमा रहेका सबै सदस्यहरु उठिसक्नुपनर्े । उहाँले नामै किटेर बोलाउनुहुन्थ्यो । त्यसपछि उहाँको छेउमा उपस्थित धरै नपाइने । हामी पाहुनाले भने त्यस्तो जरुरी थिएन, तर परिवारका सदस्यहरुले भने अनिवार्य उपस्थित हुनै पथ्र्यो । उहाँको नाति हेमवित्रmम उमेरमा मेरो भार्इ हुन्‍ तर त्योभन्दा बढी साथी पनि । उनको निन्द्रा साह्रै लामो खालको । तर बेलुकी भने रातभर पनि गफ गरेर बस्न सक्ने उनको बानी थियो । कहिले किकीसँगको चेस खेलार्इ र कहिले नातिसँगको गफले आफ्‍नो निन्द्रा पनि निकै लम्बेतान नै हुने गथ्र्यो । किकीले निर्धारण्ा गरेको समयअनुसार निन्द्रा पुर्‍याउनै गाह्रो । उहाँले बोलाउँदा उपस्थित भइएन भने कोठा(कोठामा आएर खोजीनिधी गनर्ुहुन्थ्यो । कोही सुतिरहेको भेटे सिरक तानेर उठाइहाल्नु हुन्थ्यो । किकीको यो 'हस्तक्ष्ोप'बाट जोगिने राम्रै जुत्तmि हेमवित्रmमले निकालेका थिए । त्यो के भने अघिल्लो रात नै खाटमाथि र खाटमुनि ओछ्‍यान लगाउने । रातभर खाटमाथि सुत्ने र जब किकीले खोज्न थाल्नुहुन्छ, त्यसपछि खाटमुनि भmरेर सुत्ने । बेडकभरले छोपिएको खाटमुनिको ओछ्‍यान देख्न गाह्रो हुन्थ्यो । बिहान सबेरै उठेर ढोकाको चुकुल खोल्नुपनर्े । त्यसो गरियो भने किकीलार्इ कोठामा सरासर पस्न सजिलो हुन्थ्यो । नत्र कोठा ढकढक गरेर सुत्नै नपार्इने । चुकुल खोलेर बेलैमा खाटमुनिको ओछ्‍यानमा सुत्थ्यौं । त्यसो गरेपछि किकी कोठामा सरासर आएर हेनर्ुहुन्थ्यो । ओछ्‍यान रित्तै । उहाँले सोच्नुहुन्थ्यो केटाहरु उठेर कतै काममा लागेछन्‍ । तर हामी भने खाटमुनि मज्जाले सुत्थ्यौं । यसको फाइदा उठाउँदै एक दिन हेमवित्रmमले दिउँसो १/२ बजेसम्म सुतेको सम्भmना छ । अबेरसम्म सुत्ने यो आइडियाले लामो आयु पाउन सकेन । केही दिन पछि यो आइडियाले हावा खायो । किकीले खाटमुनी सुत्ने गरेको थाहा पाउनु भएछ । त्यसपछि त्यो ठाउँ पनि असुरक्ष्ाित बन्यो । पछि साथीहरु कुन आइडिया लगाएर सुते मलार्इ थाहा भएन ।
पत्रिका पढ्‍नुपनर्े काम :
उहाँको नजिक विहान पुगियो भने पत्रिका पढ्‍नुपनर्े । पछिल्लोसमय उहाँ कान्तिपुर पत्रिकाको ग्राहक हुनुहुन्थ्यो । विहानै पत्रिका आएपछि उहाँकै कोठामा पत्रिका पुग्थ्यो । उहाँले पढिसकेपछि मात्र अरु सदस्यले पढ्‍थे । पत्रिका करार्इ(करार्इ पढ्‍नुपनर्े । उहाँलार्इ चित्त बुभmेको कुरामा होस्‍ वा नबुभmेको कुरामा दुवैमा प्रतित्रिmया जनार्इ हाल्नुहुन्थ्यो । अनि समाचारसँग सम्बन्धित मान्छे वा विष्ाय उहाँसँग सम्बन्धित भए त्यसबारे पनि जानकारी दिइहाल्नु हुन्थ्यो । यसोगर्दा धेरै विष्ायमा जानकारी पाइन्थ्यो । पत्रिका पढ्‍नका लागि यही मान्छे हुनुपर्छ भन्ने थिएन । जोसुकैले पढे पनि हुने । म आफु पनि पत्रकारितामा संलग्न भएको नाताले समाचार पढ्‍नु नौलो कुरा त थिएन । तर, साथीभार्इ आनन्दले गफिदा आफु भने चिच्यार्इ(चिच्यार्इ पत्रिका पढ्‍नुपथ्र्यो । चाँडो मुख्य समाचार पढेर टाप कस्न खोजे पनि उहाँले धरै नदिने । प्राय: पत्रिकाको सबै समाचार पढ्‍नु पथ्र्यो वा जानकारी गराउनु पथ्र्यो । त्यसपछि मात्र 'छुटि्‍ट' मिल्थ्यो ।
क्याप्टेनको टोपी :
मान्छेको जीवन चत्रm गोलो हुन्छ भन्छन्‍ । जन्मेपछि युवावस्था र विस्तारै प्रौढ हुँदै व ृद्ध हुने त्रmममा मानिसको आनीबानी दोहोरिन्छ रे । यो वास्तविक जस्तो पनि लाग्छ । शारीरिक परिवर्तनहरु जस्तै केटाकेटीमा दाँत हुँदैन र व ृद्धावस्थामा पनि । यसलार्इ हेनर्े हो भने यो भनार्इलार्इ सत्य मान्न सकिन्छ । यस्तै लाग्थ्यो किकीको जीवन पनि । सानो कुराले खुशी र दु:खी हुने मानवीय स्वाभाव जस्तै थियो उहाँको आनीबानी पनि । उहाँ अन्तिमपटक अस्पताल भर्ना हुनुभन्दा भmण्डै एक बर्ष्ा अघि मेरा काका देवराज रार्इले बेलायतबाट फुपाजु (बलबहादुर रार्इ)लार्इ टोपी र लौरो उपहार भनेर पठाउनु भएको थियो । सामान पुर्‍याउन उहाँकोमा पुगेँ । उपहार पाएपछि उहाँले साह्रै खुशी हुँदै भन्नुभयो, 'मेरो ससुरालीले मलार्इ खुब माया गर्छन्‍ । म पहिल्यैदेखि निकै प्यारो ज्वाँर्इ हुँ ।' टोपी हेरेपछि उहाँले भन्नुभयो, 'ल टोपी त गजबको रहेछ । यो त उता (गोर्खा पल्टन)का क्याप्टेन, अफिसरहरुले लगाउने खालको रहेछ । लौरो पनि राम्रो रहेछ ।' त्यो टोपी ओढेर लौरो टेक्दै घुमफिर गनर्ुहुन्थ्यो । उहाँले एउटा पुरानो कोटतिर आैंला सोभmाउदै भन्नुभयो, 'यो (कोट) पनि देवराजले नै पठाएको हो । उसलार्इ भन्दिनु मेरो आशिवार्द छ ।' त्यो टोपीको बारे धेरैलार्इ भन्नुभएछ । उहाँको छोरी, मेरो मुमु (फुपु) प्रमिला रार्इले पनि मलार्इ पछि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, 'हाम्रो पापा त टोपी पाएपछि साह्रै खुशी हुनुभएको छ । बुढाबुढी भएपछि मान्छे केटाकेटी जस्तो हुँदोरहेछ ।' त्यसपछि उहाँको शरीरमा केही फूर्ति बढेजस्तो पनि लाग्थ्यो । उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, 'यो टोपी लाएर, अनि यही लौरो टेकेर म यसपालिको दसैंमा ससुराली आउँछु है केटा हो । तयारी भएर बस्नु, आफ्‍नो ज्वार्इलार्इ के दाइजो दिने हो ?' मैले पनि 'हुन्छ कि' भन्थे । तर त्यो टोपी ओढेर र त्यो लौरो टेकेर उहाँले ससुराली जाने अवसर त पाउनुभएन । तथापि उहाँमा भर्खरको दुलहा जस्तो एकपटक आफ्‍नो ससुरालीको आँगन टेक्ने इच्छा भने थियो । त्यो अधुरै रह्‍यो । तथापि उहाँको आत्माको लागि हाम्रो घर, उहाँको ससुरालीमा सँधै स्वागत भइनैरहनेछ ।
गाउँघरको माया :
नेताहरु चुनाव जितेपछि गाउँ फर्कदैनन्‍ । काठमाडौमै घर बनाउँछन्‍ र उतै रमाउँछन्‍, गाउँघर बिर्सन्छन्‍ भन्ने मान्यता छ । व्यवहारत त्यस्तो भइरहेको पनि छ । तर उहाँ भने यो मान्यता भन्दा विल्कुल फरक हुनुहुन्थ्यो । गाउँघरबाट आउने जोकोहीलार्इ गाउँघरको प्रायश: हरेक घर र हरेक व्यत्तmिको बारे सोध्ने गनर्ुहुन्थ्यो । धारा, पधेरा, खेत, बारी, स्कूल, स्वास्थ्यचौकी, हुलाक, मन्दिर, कुलोको बारे पनि खबरहरु सोधि रहने उहाँको बानी थियो । गाउँघरको हरेक गतिविधीका बारे उहाँ 'अपडेट' हुनुहुन्थ्यो । सोधी सकेपछि आवश्यकता अनुसारको सल्लाह, सुभmाव पनि दिने गनर्ुहुन्थ्यो । यसलार्इ यसो गर, त्यसलार्इ त्यसो गर, त्यहाँबाट सहयोग लिनु, त्यसलार्इ सहयोग गनर्ु भनेर सुभmाइ रहनुहुन्थ्यो । गाउँमा आउने बजेटको बाँडफाँड के(कसरी भइरहेको छ भन्ने पनि जानकारी लिनुहुन्थ्यो । विकास निर्माण्ाका कामकुरो के हुँदैछ आदि बारे पनि चासो लिनुहुन्थ्यो । युवाहरु जहिल्यै मिल्नु पर्छ । युवाहरु मिल्न सके मात्र विकासको कामले मुर्तरुप लिन सक्छ भन्नुहुन्थ्यो । सञ्चो भएको बित्तकिै म गाउँ फर्कन्छु भन्नुहुन्थ्यो । तर उहाँको त्यो सपना भने पूरा हुन सकेन । मरे पनि आफ्‍नै गाउँमा मनर्े उहाँको चाहना पनि पूरा हुन सकेन । केही बाध्यता र सीमाहरुले उहाँलार्इ काठमाडौंस्थित शिक्ष्ाण्ा अस्पतालमा प्राण्ात्याग गर्न बाध्य बनायो । तथापि उहाँको गाउँघर फर्कने इच्छा भने अन्तिमसम्म रही नै रह्‍यो । सोही अनुसार उहाँले आफ्‍नो अन्तिम इच्छा गाउँमै समाधी हुने थियो । उहाँकै इच्छाअनुसार परिवारले हेलिकप्टर माफत्‍ गाउँमै उहाँको समाधी गरेको छ । यसले पनि उहाँको गाउँघर प्रतिको मायालार्इ भmल्काउँछ । उहाँको मान्यता के थियो भने गाउँघरमा पितापुर्खा, आमा(बाबु, श्रीमति र इष्टमित्रको पनि समाधी भएको छ, त्यहाँ जान पाइयो भने म ृत्युपछिको सुख पनि उनीहरुसँगै बाँड्‍न पाइन्छ ।
उहाँको गुनासो :
जीवनको उत्तरार्धतिर उहाँसँग अन्तरंग गनर्े धेरै अवसरहरु पाइयो । तर, पर्याप्त भएन । धेरै कुरा भोलि गरौंला, भोलि सोधौंला भन्ने बहानाले जुलुम भयो । हुन त उहाँले जिन्दगीको केही भर नहुने कुरा बताइनै रहनुहुन्थ्यो । यति हुँदाहुँदै पनि मानिसलार्इ आफ्‍नो बहानाबाजीले कहिल्यै नछाड्‍दो रहेछ । अहिले आएर मलार्इ त्यसो लागिरहेको छ । यदि त्यसो नभर्इ दिएको भए आज धेरै उहाँका अनुभूतिहरु समेट्‍न सकिन्थ्यो । जुन नयाँ पुस्ताका लागि 'गाइड लाइन' हुन सक्थ्यो । जेहोस्‍ नहुने कुरा भइगयो यो कुरालार्इ यही छाडौ । बरु उहाँले आफ्‍नो जीवनको उत्तरार्ध तिर गनर्ुभएका केही गुनासाहरुलार्इ यहाँ समेट्‍न उचित ठानेको छु ।२०४८ सालको चुनावी अभियानमा उहाँले ओखलढुंगामा मोटरबाटो पुर्‍यार्इ छाड्‍ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको रहेछ । प्रतिबद्धता बमोजिम उहाँ आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री हुनु भएको बेला कटारी(ओखलढुंगा सडकको योजना प्रारम्भ भयो । उहाँले सो सडकका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र यातायात मन्त्रीसँग संघर्ष्ा गरेको कुरा सुनाउनु हुन्थ्यो । ओखलढुंगामा सडक पुग्नुको पछाडि उहाँको महत्वपूर्ण्ा योगदान छ । जिल्लामा अभmै पनि सडक पुर्‍याउने जस उहाँलार्इ नै छ । यसका लागि उहाँले धेरै संघर्ष्ा पनि गनर्ुभयो । गाउँघरमा अभmै पनि सडकसँगै उहाँलार्इ सम्भिmने गरिन्छ । सडक नपुगेको भए ककुरी र बहादुरा खोलाको सयौं जघाँर तरेर गाउँघरदेखि शहर र शहरदेखि गाउँघर पुग्नुपनर्े बाध्यता कायमै रहन्थ्यो । क्वीन्टलका भारी बोक्नुपनर्े बाध्यताका थाप्लाहरुले अभmै डोको, नाम्लो, खकन र टोक्मासँग पौंठेजोरी खेल्नु पथ्र्यो । नुन खानका लागि हप्ता दिनको कठोर यात्रा गनर्ुपथ्र्यो । तर, अहिले सडक पुगेपछि ढाकर बोक्ने परम्परा केही हदसम्मका लागि कथा भएको छ । घर(घरमा नुन, तेल, चामलको सहज पहुँच पुगेको छ । मानिसको दैनिक जीवन सरल बनेको छ ।उहाँको नेत ृत्वमा थालिएको सडकले ढिलो(चाँडो कटारीदेखि ओखलढुंगा सदरमुकाम टेकेरै छाड्‍यो । अहिले त जिल्लाको गाउँगाउँमा सडक पुगेको छ । नपुगेको ठाउँमा निर्माण्ा कार्य भइरहेको छ । नबनेका ठाउँमा समेत बन्ने योजनाहरु भइरहेका छन्‍ । यो सबै हुनुमा बलबहादुर रार्इको समर्पण्ा र त्यागलार्इ सबैले सम्भmन्छन्‍ । तर कटारीदेखि ओखलढुंगा जोडिएको सडकको नामाकरण्ा भने युगकवि सिद्धिचरण्ा श्रेष्ठको नाममा नामाकरण्ा भयो । यो पनि आफैमा खुशीको कुरा नै हो । यसमा भने उहाँले जहिल्यै गुनासो गनर्ुहुन्थ्यो । उहाँ भन्ने गनर्ुहुन्थ्यो, 'काम गनर्े कालु, मकै खाने भालु भनेको यही हो ।' उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, 'सडकको नाम राख्नका लागि जिल्लाका साथीहरुले राजनीति गरे । यो मलार्इ ठीक लागेन । विकासको काममा यसरी राजनीति गनर्ुहुन्थ्यो ।' उहाँका अनुसार नेकपा एमालेको सरकार भएको बेला सडकको नामाकरण्ा गरिएको थियो । सडकको नाम के राख्ने भन्नेमा उहाँसँग छलफलसमेत गरिएन । यो कुराले उहाँलार्इ जीवनको अन्तिम समय अस्पतालमा बिताउँदा समेत चित्त दुखाएको थियो । स्वाभाविक रुपमा कवि सिद्धिचरण्ा श्रेष्ठले कविताको माध्यमले ओखलढुंगालार्इ चिनाउन सफल भए । तर, राजनैतिक रुपले र विकासका द ृष्टिकोण्ाले आदर्शलार्इ यथार्थमा उतानर्े काम भने बलबहादुर रार्इले नै गरेका हुन्‍ । अभmै पनि केही घर्किएको छैन । यसबारे जिल्लाबासीले सोच्न सकिन्छ । काम गनर्ेलार्इ जस दिन हामी किन हिच्किचाउने ? यदि उहाँको यो चित्त दुखार्इलार्इ हामीले अनुभूत गर्न सक्यौं भने उहाँको आत्मालार्इ शान्ति मिल्नेछ र उहाँ प्रति हामीले गनर्े आफ्‍नो कर्तव्य पनि पूरा हुनेछ । होइन भने ओठे श्रद्धाञ्जली मात्र खर्चियौं भने त्योभन्दा गद्धारी र बेइमानी केही हुने छैन ।
फेरि जन्मनुहुनेछ साहिँला रार्इ :
भनिन्छ, शरीर र आत्मा फरक(फरक कुरा हो । यी दुर्इको मिलनलार्इ नै जीवन भनिन्छ । अनि के पनि भनिन्छ भने शरीरको म ृत्यु हुन्छ तर आत्माको हुँदैन । यसरी हेर्दा उहाँको शरीरको मात्र म ृत्यु भएको छ तर आत्मा जिवितै छ । दैनिक गीता पाठ गनर्े उहाँले दोहोर्‍याइरहने कुरा भनेको मान्छेको पुनर्जन्म पनि हो । तर उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, 'राजनीति गनर्े मान्छेको कहिल्यै म ृत्यु हुँदैन । उ जन्मन्छ, मर्छ र फेरि जन्मछ अनि राजनीति नै गर्छ ।' उहाँले यो सन्दर्भमा गीताको यो श्लोक दोहोर्‍याउनु हुन्थ्यो र अथ्र्याउनु पनि हुन्थ्यो । 'उद्दबद गच्छन्ति तत्व शा । मध्य तिष्ठन्ति राजाशा ।जघन्या गुण्ा विशितथा । अधोगच्छन्ति तामशा ।।' यसको अर्थ राजनीति गनर्े मानिस कहिल्यै स्वर्ग जाँदैनन्‍ । मर्छन्‍, जन्मन्छन्‍ फेरि राजनीति नै गर्छन्‍ । उनीहरुले यो भवसागरबाट कहिल्यै पार पाउँदैनन्‍ । अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, 'यो बुभmेर पनि म राजनीति गर्दैछु । राजनीति मेरो पेसा हो । यसमा मेरो धेरै पसिना परेको छ । राजनीतिमै मेरो जिन्दगी बित्यो । गीताले जे भने पनि राजनीति गनर्ु भनेको देश र जनताको सेवा गनर्ु हो । सेवा गर्दा पनि स्वर्ग गइँदैन भने कसो गनर्े त ?'उहाँको यो जुनीमा नब्बे बर्ष्ाको अनुभवलार्इ संगाल्नु भएको छ । ती अनुभूतिहरुलार्इ मैले आफ्‍नो तीस बर्ष्ो जिज्ञासाको भाँडोमा समेट्‍न खोजे पनि, तर त्यो सम्भव नै थिएन । मलार्इ आशा छ, उहाँको इच्छा जस्तै पुनर्जन्म पाउनु भएमा उहाँले पक्कै पनि आफ्‍नो गाउँघरलार्इ भूल्नु हुने छैन । हामी उहाँको आत्माको पहिचान गर्न त सक्दैनौ नै । तर, उहाँको जस्तै इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र गाउँघरको विकासका काममा प्रतिवद्ध लागी पनर्े जोकोहीमा उहाँको आत्माले बास पाएको छ भन्ने बुभm्‍ने छौं । अन्त्यमा किकी तपार्इंलार्इ गाउँमै पाएर पनि गाउँलेले अभmै 'मिस्ड' गरिरहेका छन्‍ । जयनेपाल ।
मोली(३, ओखलढुंगा, ७ असार २०६८
Posted by dhirendra at 8:05 AM No comments:
पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता स्व. बलबहादुर राईको पहिलो बार्षिक पूण्यतिथिको अवसरमा असार २० गते राष्ट्रिय सभा गृहमा bhayeko कार्यक्रम
Posted by dhirendra at 1:09 AM 1 comment:
पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता स्व. बलबह...